Somali News 07.02.21 | KWIT
Kormeeraha Abaaraha ee Mareykanka wuxuu muujiyay in ka badan 85% Iowa nooc ka mid ah abaarta. Taasi waxay ka hooseysaa 7% usbuucii ka horreeyay. Laakiin, in ka badan laba jibaar heerka sedex bilood ka hor.
Midkoodna Iowa looma kala saari karin labada qaybood ee abaarta ugu daran. Sikastaba, qeyb weyn oo katirsan waqooyi-galbeed Iowa ayaa wajaheysa abaar daran.
Soddon ka mid ah sharci dejiyayaasha gobolka Nebraska ayaa ku boorrinaya guddiyada iskuulada maxaliga ah inay diidaan heerarka caafimaadka ee gobolka ee la soo jeediyay oo ay ku jiraan casharo loogu talagalay carruurta yaryar oo ku saabsan aqoonsiga jinsiga iyo muujinta jinsiga Mudanayaashu waxay soo saareen bayaanka guud ee wadajirka ah ee guddiyada iskuulada deegaanka. Heerarka ay tixgelineyso Waaxda Waxbarashada Nebraska waxay noqon doontaa ikhtiyaari. (Marka loo eego heerarka la soo jeediyay, xanaanada caruurta waxay baran doonaan noocyada kala duwan ee qaabdhismeedka qoyska, oo ay ku jiraan qoysaska isku jinsiga ah. Ardayda fasalka koowaad waxaa la bari doonaa aqoonsiga jinsiga iyo fikradaha ku saleysan jinsiga.)
Sabtida beerta dhexdeeda ayaa la qabtaa dhammaadka wiigga. Bandhig faneedka bilaashka ah ayaa hakad ku jiray xalay sababo la xiriira faafida COVID-19. Dhacdadu waxay ku laabanaysaa Grandview Park oo loogu talagalay dabaaldeg 2-maalmood ah oo la soo gabagabeeyo caawa kadibna dib u bilaabmo berrito 2 pm Qaar ka mid ah ficilada muusikada waxaa ka mid ah AJR oo garaacaya masraxa caawa, iyo berri, Waka Flocka Flame, Valerie June, iyo John Fogerty.